Yoshuwa 8 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
8 Wandula uYehova wathi kuYoshuwa: “Musa ukoyika okanye unkwantye.+ Thabatha bonke abantu bemfazwe uze usukume, unyuke uye eAyi. Yabona, ndimnikele esandleni sakho ukumkani waseAyi nabantu bakhe nesixeko sakhe nelizwe lakhe.+ 2 Yaye umele wenze kwiAyi nakukumkani wayo kanye njengoko wenzayo kwiYeriko nakukumkani wayo.+ Kuphela nje ninokuwaphanga wona amaxhoba ayo nezilwanyana zayo zasekhaya.+ Bekani abantu basilalele isixeko ngasemva.”+ 3 Ngako oko uYoshuwa nabo bonke abantu bemfazwe+ basukuma benyuka baya eAyi, yaye uYoshuwa wakhetha amadoda angamashumi amathathu amawaka, amakroti anamandla,+ waza wawathumela ngobusuku. 4 Yaye wahlabela mgama wawayalela, esithi: “Yabona, nilalele+ isixeko ngasemva. Ningayi kude kakhulu nesixeko, yaye nonke nifanele nihlale nilungile. 5 Mna ke nabo bonke abantu abakunye nam, siya kusondela esixekweni. Yaye kuya kuthi, ukuba kwenzekile baphuma beza kusihlangabeza kanye njengasekuqaleni,+ siya kwandula ke sisabe phambi kwabo. 6 Yaye bamele baphume emva kwethu de sibe sibatsale bemka esixekweni, kuba baya kuthi, ‘Bayasaba phambi kwethu kanye njengasekuqaleni.’+ Yaye simele sisabe phambi kwabo. 7 Nandule ke nina—niphakame apho nilalele khona, nize nisithabathe isixeko; yaye uYehova uThixo wenu ngokuqinisekileyo uya kusinikela ezandleni zenu.+ 8 Yaye kuya kuthi kamsinya nje nakuba nisithimbile isixeko, nisitshise isixeko.+ Nifanele nenze ngokuvumelana nelizwi likaYehova. Niyabona, ndiniyalele.”+ 9 Emva koko uYoshuwa wawathuma kwaye ahamba aya kwindawo yokulalela aza ahlala phakathi kweBheteli neAyi ngakwintshona yeAyi, ngoxa uYoshuwa ngobo busuku waqhubeka ehleli phakathi kwabantu. 10 Waza uYoshuwa wavuka ekuseni+ wahlola abantu wenyuka, yena namadoda amakhulu akwaSirayeli, baya eAyi. 11 Bonke abantu bemfazwe+ ababekunye naye benyuka, ukuze basondele baye ngaphambi kwesixeko, bamisa inkampu ngakumntla weAyi, iyintlambo phakathi kwabo neAyi. 12 Ngelo xesha wathabatha amadoda amalunga namawaka amahlanu waza wawamisa ukuba alalele+ phakathi kweBheteli+ neAyi, ngakwintshona yesixeko. 13 Ngoko abantu bamisa iqela eliyintloko elalingakumntla wesixeko+ nabalaleli abangasemva ababengakwintshona yesixeko,+ yaye uYoshuwa wahamba ngobo busuku waya phakathi entilini. 14 Yaye kwenzeka ukuba, kamsinya nje akukubona oko ukumkani waseAyi, amadoda esixeko akhawuleza avuka ekuseni aphuma aya kuhlangabezana noSirayeli edabini, yena nabo bonke abantu bakhe, ngexesha elimisiweyo, phambi kwethafa eliyinkqantosi. Ke yena, wayengazi ukuba kwakukho abamlaleleyo emva kwesixeko.+ 15 Xa uYoshuwa naye wonke uSirayeli babethwayo phambi kwabo,+ basaba ngoko ngendlela yasentlango.+ 16 Ngako oko babizwa bonke abantu ababesesixekweni ukuba babasukele, yaye bamsukela uYoshuwa baza batsalwa bemka esixekweni.+ 17 Kwaye akukho mntu wasalayo eAyi naseBheteli ongazange alandele uSirayeli, kangangokuba basishiya isixeko sivulekile baza basukela uSirayeli. 18 Ngoku uYehova wathi kuYoshuwa: “Yolulela intshuntshe esesandleni sakho ngaseAyi,+ kuba ndiya kuyinikela esandleni sakho.”+ Ngako oko uYoshuwa wayolulela ngasesixekweni intshuntshe eyayisesandleni sakhe. 19 Yaye abo babelalele baphakama ngokukhawuleza kwindawo ababekuyo, kwaye baqalisa ukubaleka ekoluleni kwakhe isandla sakhe, baza bangena esixekweni basithimba.+ Baza bakhawuleza basitshisa isixeko.+ 20 Kwaye amadoda aseAyi akhangela ngasemva aza abona, nanko umsi wesixeko unyukela emazulwini, yaye akazange abe namandla okuba asabe ngale ndlela okanye ngaleya. Yaye abantu ababesabela entlango babajikela abo babesukela. 21 Yaye uYoshuwa naye wonke uSirayeli babona ukuba abo babelalele+ basithimbile isixeko, nokuba umsi weso sixeko wawusenyuka, ngoko bajika babaxabela abantu baseAyi. 22 Yaye abanye aba baphuma esixekweni beza kubahlangabeza, baza baphakathi koSirayeli, aba kweli cala nabaya kweliya, baza babaxabela de akwabakho useleyo nokuba ngosindayo okanye obalekayo.+ 23 Baza bambamba ukumkani+ waseAyi ephila bamsondeza kuYoshuwa. 24 Yaye kwenzeka ukuba ngoxa uSirayeli wayegqiba ukubulala bonke abemi baseAyi ezweni, kwintlango ababebasukela kuyo, bawa bonke, ngohlangothi lwekrele de baphela. Emva koko wonke uSirayeli wabuyela eAyi waza wayixabela ngohlangothi lwekrele. 25 Yaye bonke abo bawayo ngaloo mini, ukususela endodeni kuse emfazini, baba lishumi elinesibini lamawaka, bonke abantu baseAyi. 26 Yaye uYoshuwa akazange asibuyise isandla sakhe awayesolule sinentshuntshe+ de waba ubatshabalalisile bonke abemi baseAyi.+ 27 Zizilwanyana zasekhaya namaxhoba eso sixeko kuphela awaziphangela wona uSirayeli, ngokuvisisana nelizwi likaYehova awalibeka njengomyalelo kuYoshuwa.+ 28 Waza uYoshuwa wayitshisa iAyi wayinciphisa yayindulana ehleli ngokungenammiselo,+ njengesiphanziso kude kube namhla. 29 Yaye wamxhoma ukumkani waseAyi+ esibondeni de kwangokuhlwa;+ kwaye njengoko ilanga laliseliza kutshona uYoshuwa wanikela umyalelo, baza basithula+ esibondeni isidumbu sakhe basiphosa esangweni lesixeko yaye bemisa imfumba enkulu yamatye phezu kwaso, de kube namhla. 30 Kungoko ke awathi uYoshuwa wamakhela isibingelelo+ uYehova uTHIXO kaSirayeli, kwiNtaba ye-Ebhali,+ 31 kanye njengoko uMoses umkhonzi kaYehova wayebayalele oonyana bakaSirayeli, njengoko kubhaliwe encwadini yomthetho+ kaMoses: “Isibingelelo samatye apheleleyo, ekungazange kuphakanyiswe sixhobo santsimbi kuwo”;+ yaye banikela phezu kwaso iminikelo etshiswayo kuYehova baza babingelela imibingelelo yobudlelane.+ 32 Waza wawukhuphela+ ematyeni umthetho kaMoses, lowo wayewubhale phambi koonyana bakaSirayeli.+ 33 Yaye wonke uSirayeli namadoda akhe amakhulu+ namagosa nabagwebi bawo babemi ngapha nangapha kweTyeya ngaphambi kwababingeleli,+ abangabaLevi, bethwele ityeya yomnqophiso kaYehova,+ umphambukeli nenzalelwane,+ isiqingatha sabo ngaphambi kweNtaba yeGerizim+ nesinye isiqingatha sabo ngaphambi kweNtaba ye-Ebhali,+ (kanye njengoko uMoses umkhonzi kaYehova wayeyalele,)+ waza waqala wamsikelela+ uSirayeli. 34 Yaye emva koku wafunda ngokuvakalayo onke amazwi omthetho,+ intsikelelo+ nesiqalekiso,+ ngokuvumelana nako konke oko kubhalwe encwadini yomthetho. 35 Akuzange kubekho nalinye ilizwi kuwo onke uMoses awayewayalele uYoshuwa angazange alifunde ngokuvakalayo ngaphambi kwalo lonke ibandla lakwaSirayeli,+ kunye nabafazi+ nabantwana+ nabaphambukeli+ ababehamba phakathi kwabo.